“मेटमणी चौधरीले दिए, नेकपा एस पार्टीनै, कोल्याप्स हुन सक्ने ,चेतावनी ! « Nipolnews
“मेटमणी चौधरीले दिए, नेकपा एस पार्टीनै, कोल्याप्स हुन सक्ने ,चेतावनी !
“नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको दल नेकपा एस भित्रको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भएको छ । मन्त्री भएकाहरु हट्न नमान्ने र मन्त्रीका लागी नाम सिफारिस भएकाहरु मन्त्री नभइ नछोड्ने विषय पेचिलो बन्दै जाँदा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पिल्सीएका छन् ।”
“नेकपा एस पार्टीले रामकुमारी झाँक्रीलाई हटाएर उनको ठाउँमा मन्त्री बन्नका लागी सिफारिसमा परेका नेकपा एसका नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य मेटमणी चौधरीले नेकपा एस पार्टीनै कोल्याप्स हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।”
“ओटिभी नेपाल डटकमसँग कुराकानी गर्दै नेता चौधरीले यहि पारा हो भने नेकपा एस पार्टीनै कोल्याप्स हुन सक्ने बताएका छन् । दलीय व्यवस्थामा दलले गरेको निर्णयनै कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने दलीय व्यवस्थाको मर्म के बाँकी रहन्छ? भन्दै उनले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।”
“तपाईको पार्टीले गरेको निर्णयनै कार्यान्वयन हुन सकेन मन्त्री बन्न सपना त पुरा होला जस्तो छैन त ? भन्ने ओटिभि नेपालको प्रश्नमा चौधरीले यस्तो किन भयो भनेर बालुवाटारलाई प्रश्न गर्नु पर्ने जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एसले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले आपत्ती जनाएका छन् ।”
“प्रधानमन्त्रीसँग कुनै विशेष अधिकारी नरहरने भन्दै चौधरीले दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा माथी कोहि हुन नसक्ने भन्दै देउवा प्रति तितो पोखेका छन् । नेकपा एसले गरेको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन हुनु पर्ने भन्दै उनले कार्यान्वयन नगरेमा दलीय प्रणालीमै प्रश्न उठ्छ भनेका छन् ।”
“दलले गरेको निर्णयनै कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने दल भन्नुको औचित्य पनी नरहने भन्दै पार्टीनै कोल्याप्स हुन सक्ने चौधरीले बताए । यसरी पनि कसरी हुन्छ भन्नुस् त भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका चौधरीले पाटी भन्नुको औचित्यनै बाँकी नरहने बताए ।”
“अहिले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुको रवैया ठिक नभएको भन्दै चौधरीले आपत्ती जनाएका छन् । दल भन्दा ठुलो व्यक्ति हुन नसक्ने भन्दै कसैका घुर्कि र धम्कीले पार्टी डराउँनु नहुने पनि उनले बताए । जे भइरहेको छ विल्कुल गलत भइरहेको जिकिर पनि उनले गरे ।”